Dhimashada Fidel Castro oo laga soo dhaweeyay Mareykanka: SAWIRRO
Magaalada Miami, gobolka Florida ee dalkaasi Mareykanka ayaa waxaa laga soo dhaweeyay dhimashada halgamaagii caanka ahaa ee reer Cuba Fidel Castro kaas oo xalay abaarihii 22: 29 mirir ku geeriyooday magaalada Havana, sida uu shaaca ka qaaday walaalkii Raul Castro.
HINDIYA: Hooyooyinka xannaanada geysta carruurta oo fajacay kaddib markii ay daawadeen film-kan: VIDEO
Dhacdo ka fajacisay hooyooyinka caruurta geysta xannaanada ayaa waxa ay ka dhacday dalkaasi Hindiya kaddib markii ay daawadeen cunug 9-bilood jir ah oo lagu silcinayo mid ka mid ah xannaanooyinka dalkaasi ka jira. Gabadha falkan geysatay ayaa lagu magacaabaa Afsana Shaikh.
by calanka —	November 26, 2016 —	Video
Booliska magaalada New York oo la wareegay gacan ku haynta daarta “Trump Tower”: SAWIRRO
Booliska magaalada New York iyo shirkadda ilaalada ee Sicret Service ayaa waxaa soo wajahay culeys weyn kaddib markii ay la wareegeen gacan ku haynta daarta “Trump Tower” ee uu leeyahay, daggan yahayna madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump.
by calanka —	November 25, 2016 —	Sawirro
Daawo waxa qabsada ninkan madowga ah xilli uu ku dhex jiray dukaan uu gadayay: VIDEO
Otis Gooding ayaa waxaa ku dhex qarxay jeebkiisa sigaarka korontada ku shaqeeya xilli uu ku sugnaa gaabtiisa shaqada, waxaana islamarkii uu qaraxa siqaarka bilowday ka kala cararay asxaabtii uu la shaqeynayay iyo wuux macaamil ahaa.
by calanka —	November 25, 2016 —	Video
Magaalada Haifa oo dab looga qaxayo iyo dowladda Israel oo damiskiisa ku wareertay: SAWIRRO
Magaalada Haifa oo ku taal waqooyiga Israel ayaa waxaa ka taagan dab damidskiisa lagu wareeray oo ay dowladdu ka shakisan tahay in la shiday. Dabka oo marba marka ka dambeysa sii xoogeysanaya ayaa waxaa uu sababay qax baahsan.
Fannaan Justin Biber oo feeray mid ka mid ah taagaareyaashiisa: VIDEO
Fannaanka da`da yar ee reer Mareykan Justin Biber ayaa wajiga ka feeray, dhiigna ka keenay mid ka mid ah taageerayaashiisa mar uu ku sugnaa magaalada Barcelona ee dalkaasi Spain halkaas oo uu show ku lahaa.
by calanka —	November 24, 2016 —	Video
Waa ceynkee darbiga uu doonayo Domald Trump in uu ka dhiso xadka Mexico?
Tan iyo markii uu ku jiray olalaha doorashada madaxweynaha cusub ee dalkaasi Mareykanka Donald Trump waxaa uu hadal hayay dhisidda darbi kala bara waddamada Mareykanka iyo Mexico kaas oo ay kharashkiisu bixin doonto dowladda Mexico.
by calanka —	November 23, 2016 —	Video
Michael Keating oo u caddeeyay xubnaha tartamaya in jadwalka doorashada dagsan yahay: VIDEO
Madaxa xafiiska UNSOM ee magaalada Muqdisho Michael Keating ayaa safar uu ku tagay magaalada Jowhar u caddeeyay in jadwalka doorashada uu dagsan yahay islamarkaana aan laga weecan karin, laguna qasban yahay in la xishmeeyo.
Ellen oo albaabka aqalka cad laga xirtay: VIDEO
Haweeneyda caanka ku ah islamarkaana daadihisa barnaamijka “THE ELLEN SHOW” oo ka mid aheyd shakhsiyaadka uu xalay biladda u qeybinayay madaxweynaha Mareykanka ayaa loo diiday in ay gasho gudaha aqalka cad oo lagu casuumay kaddib markii ay soo illowday kaarkeeda aqoonsiga.
Arooskii ugu kharashka badnaa oo ka dhacay dalka Hindiya: SAWIRRO
Ganacsade milyineer ah oo lagu magacaabo Janardhana Reddy islamarkaana u dhashay dalka Hindiya ayaa gabar uu dhalay oo lagu magacaabo Brahmani waxa uu u dhigay aroos uu ku baxay kharash lagu sheegay $74 milyan oo dollar. Dhaqanka dalka Hindiya ayaa ah gabadhu qabto kharashka ninka guursanaya iyo arooskaba.
by calanka —	November 22, 2016 —	Sawirro